सलाह विश्वकपमा ‘नपत्याउने खोला’ - खबरम्यागजिन
नाम : मोहम्मद सलाह /जन्ममिति : 15 जून 1992 /जन्मस्थानः नाग्रिग, इजिप्ट/ उँचाइ:5फुट9इन्च/ खेल्ने पोजिशन: स्ट्राइकर /जर्सी नम्बर : 10/11/ वर्तमान क्लब : लिभरपुल कुल क्लब /म्याच: 213/ कुल क्लब गोल: 89/ अन्तरराष्ट्रिय म्याच: 31 /कुल गोल सङ्ख्या: 28/विश्वकपमा उपस्थिति : पहिलोपटक
‘नपत्याउने खोलाले बगाउँछ’ लोकोत्ति नै छ। इजिप्टका सनसनी मोहम्मद सलाह पछिल्लो वर्ष इङ्ग्लिस प्रिमियर लीगमा ‘नपत्याउने खोला’ नै थिए। तर उनले साँच्चै बगाए। आफ्नो अविस्मरणीय प्रदर्शनकै बाढ़ीमा अरू टीमलाई बगाउने सलाहले ब्राजीली फेर्मिलो र सेनेगली सेडियो मानेसँग मिलेर लिभरपुरलाई च्याम्पियन्स लीगको फाइनलसम्म पुर्‍याए, तर दुर्भाग्य के भने सलाह, फेर्मिनो र मानेहरूको मेहनतलाई जर्मनीका गोलकिपर लोरिस करिउसले पानीमा डुबाए।
सुन्दर सपनामा डढ़ेलो लगाए। सबै सत्यनाश गरे। सलाह, माने र फेर्मिनोहरूकै बलबुतामा 11 वर्षपछि लिभरपुल च्याम्पियन लीगको फाइनलसम्म पुगेको हो, दुर्भाग्य बलियो रियल म्याड्रिडविरुद्ध टीमका गोलकिपर करिउसले पानीमरुवा प्रदर्शन गरे। रियललाई जिताउन यिनै गोलकिपर सहयोगीको भूमिकामा देखापरे। सन् 2017-18 सत्र मोहम्मद सलाहका लागि उत्कृष्ट रह्यो।
यो उच्च प्रदर्शनले उनलाई धेरै उपाधि दिलाए। एक सत्रमा सबैभन्दा बढ़ी गोल गर्ने रोनाल्डोको रेकर्ड तोड़े। मेस्सीलाई पछि पारे। सबैभन्दा ठूलो कुरो इजिप्टलाई विश्वकपको मूल पर्वमा पुर्‍याए। आज इजिप्ट विश्वकपमा छ त सलाहको कारण हो। र अघिल्लो चरणमा पुगिहाले यी 25 वर्ष खेलाड़ीकै कारण पुग्नेछ।
सलाह ती खेलाड़ी हुन्, जसलाई चेल्सीका प्रशिक्षक जोस मोरिन्होले 2014/16-को सत्रमा अधिकांश म्याचमा बेञ्चमा बसाएका थिए। लगभग 36-कै आँकड़ा रहेको मोरिन्होले सलाहलाई टीममा राखिरहन उचित ठानेनन्। त्यसैले इटालियन क्लब एएस रोमालाई बेचे। रोमालाई बेचिनु सलाहका लागि वरदान नै साबित भयो। रोमामा यी अफ्रिकी खेलाड़ीजस्तो खेले, त्यसबाट उनीप्रति विश्वको दृष्टि तानिन शुरु भयो। इङ्ग्लिस क्लब लिभरपुलको तीखो आँखामा सलाह पर्‍यो।
यसका प्रशिक्षक जर्मन क्लोपले उनलाई पुनः इङ्ग्लिस प्रिमियर लीगमा ल्याए। यहींबाट सलाहको खेल जीवनले उच्चता प्राप्त गर्‍यो। स्पोर्ट्समा एउटाभनाइ चर्चित छ, खेलाड़ीको ‘फर्म होइन क्लास’ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। लय गुमाइसकेका खेलाड़ीले पनि आफ्नो विशेष क्लासकै कारण पुनः लय प्राप्त गर्छन्। आज उच्च लयमा रहेका खेलाड़ी भोलि त्यो लय नहुनसक्छन्, तर क्लास सधैं रहनेछ। यो क्लासले नै कुनै खेलाड़ीलाई माथि पुर्‍याउँछ। आज हामी रोनाल्डो, मेस्सीहरूको ‘क्लास’-कै फ्यान हौं।
अहिले सलाहलाई मन पराइरहेको पनि क्लासकै कारण हो। यो ‘क्लास’-ले नै उनी इजिप्टका मेस्सी हुन्। इजिप्टका रोनाल्डो हुन्। बललाई लिएर विपक्षी दलको गोल पोस्टतिर दौड़िने र गोल गर्ने जुन कला सलाहमा छ, त्यो साँच्चै अद्भूत र मनहर्ने छ। आज यो कलाकै कारण उनी विश्वका जण्डा स्ट्राइकर बनेका छन्। वाह! वाह! बटुलिरहेका छन्। रूस विश्वकपमा सबैको आँखामा परेका खेलाड़ी बनेका छन्। वास्तवमा आज ज-जसले इजिप्टको नाम लिइरहेका छन्, सलाहकै कारण लिइरहेका हुन्। सलाह अर्थात् इजिप्ट।
सलाह अर्थात् इजिप्टको सपना। अफ्रिकी देश इजिप्ट 28 वर्षपछि विश्वकपको मूल पर्वमा पुगेको छ। यसभन्दा अघि सन् 1934 र 1990 गरी केवल दुईपटक इजिप्ट विश्वकपको मूल पर्वमा पुगेको थियो। यद्यपि यसले विश्वकपमा अहिलेसम्म एकै म्याच पनि जित्नसकेको छैन। यसैले पनि इजिप्टका यी नयाँ ट्यालेन्ट सलाहमाथि थुप्रै दायित्व छ। थुप्रै आशा-भरोसा छ।
खुल्ला आँखाले देखेको सुन्दर सपना छ। त्यो देखेको सपनालाई साकार बनाउने पहाड़जत्रो चुनौती छ। विश्वकपमा इजिप्टको यात्रा सहज छैन। पुरानो इतिहासलाई फेर्ने चुनौती पहाड़भन्दा अग्लो छ। समूहमा एउटै म्याच जिते इजिप्टले इतिहास फेर्नेछ, तर केवल एउटा म्याच जित्ने लक्ष्य सलाहहरूको पक्कै होइन। राम्रो खेल्नसके अघिल्लो चरणमा पुग्नसक्ने सम्भावना र विश्वास इजिप्टलाई छ। यो समूहमा सलाहहरूको बलियो चुनौती भनेको उरुग्वे हो।
जसलाई जित्न इजिप्टलाई साँच्चै फलामको चिउरा चपाउनुजस्तै गाह्रो हुनेछ। गाह्रो हुनसक्ला, तर जित्नै सकिँदैन भन्ने पनि ठोकुवा गर्न मिल्दैन। फुटबल खेलमा असम्भव भन्ने केही हुँदैन। अपत्यारिलो थुप्रै परिणाम हामी अघि छन्। यसै पनि इजिप्ट र सलाहहरू म्याचको परिणाम उल्ट्याउन खप्पिस छन्। असम्भवलाई सम्भव बनाउन पोख्त छन्। म्याचको परिणाम उल्ट्याएरै र असम्भवलाई सम्भव बनाएरै आज इजिप्ट विश्वकपमा छ। यी अफ्रिकी टीमका लागि उरुग्वे ‘पहाड़’ भए तापनि आयोजक रूस र साउदी अरब आफूसमान ‘मैदान’ टीम हुन्। यी दुई टीमलाई पराजित गर्नसके इजिप्ट अवश्यै अघिल्लो चरणमा पुग्नेछ।
यदि सलाहहरूले यसो गर्नसके इजिप्टेली फुटबलको उकालोतिर यात्राका लागि कोशेढुङ्गा प्रमाणित हुनेछ। आगामी दिनमा उज्यालो सम्भावनाका धेरै खिड़्कीहरू उघार्नेछ। स्पेनी क्लब रियल म्याड्रिडविरुद्ध च्याम्पियन लीगको फाइनलमा घाइते भएका इजिप्टका यी स्टार खेलाड़ी विश्वकपको आफ्नो म्याचअघि नै पूर्णरूपले फीट हुने प्रशंसकहरूलाई आशा छ। सलाह त्यस्ता खेलाड़ी हुन्, जसले एकलै खटेर टीमलाई वैतरणी तार्ने क्षमता राख्छन्। विश्वकपको छनौट खेलमा उनले आफ्नो कौशल देखाइसकेका छन्।
रिपब्लिक अफ् कङ्गोविरुद्ध सलाहले जुन दुई गोल छिराए, त्यसले इजिप्टलाई 28 वर्षपछि विश्वकपको मूल पर्वमा पुर्‍यायो। हिजोसम्म सामान्य मानिने उनी आज आफ्नो असाधारण कलाको कारण विश्वकै जण्डा खेलाड़ी बनेका छन्। सलाहलाई छोडेर भर पर्नसकिने क्षमता भएको अर्को खेलाड़ी इजिप्टसँग छैन। यसैले इजिप्टेली नागरिक र इजिप्टलाई चियर्स गर्ने तथा सलाहको खेललाई मन पराउनेहरूले उनीमाथि ठूलो सपना देखेका छन्।
आशा र भरोसाको चान लगाएका छन्। यसले दायित्वको गह्रौं भारी उनको काँधमा थपिएको छ। दबाउ उस्तै ठूलो छ। यद्यपि दबाउमा राम्रो खेल्ने, आफ्नै बलबुतामा टीमलाई अघि बोकेर लैजाने नै महान् खेलाड़ी हुन्। यो विश्वकपमा महान् खेलाड़ी बन्ने सलाह अघि सुनौलो मौका छ। यो मौकालाई सलाहले कतिसम्म सदुपयोग गर्नेछन्, हेर्नुछ। अहिले आफूले जन्माएको सलाहमाथि इजिप्टले देखेको सपना, ‘इतिहासको सुधार’ हो।
यो इतिहासलाई सलाहले जति सुधार्ने छन्, उनको ‘हाइट’ त्यति नै अग्लिनेछ। पछिल्लो वर्ष अफ्रिकी देशका सर्वश्रेष्ठ खेलाड़ी चुनिएका, यो वर्ष युरोपकै श्रेष्ठ खेलाड़ीमध्ये एक गनिएका सलाहका लागि यो ‘इतिहास सुधार्ने कार्य’ चट्टान फोरेजस्तो गाह्रो नहुनुपर्ने हो, सबैले हेक्का राखेका छन्, किनभने उनी अहिले करिअरकै उच्च लयमा छन्।
25 वर्षे वय भनेको केही गर्नका लागि उपयुक्त उमेर हो। सलाह बुझ्छन्, ‘उनीमाथि जुन सपना देशको छ, त्यो लरतरो सपना होइन्। यो सपना विशेष मान्छेमाथि गरिन्छ। त्यो विशेष मान्छे अहिले इजिप्टेली फुटबलका सलाह हुन्।
Breaking News, कालेबुङ, खेलकुद, मुख्य समाचार